ဒီနေ့…. ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ လူတစ်ယောက်အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေး မိမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ကိုယ့်မြေကိုယ်ရေ မှာ သူများမျက်နှာကြည့်စရာမလို ရင်ကိုကော့ ခေါင်းကိုမော့ပြီး နေထိုင်နိုင်အောင် ဘဝတစ်ခုလုံးကို ပေးဆပ်ကာ လွတ်လပ်ရေးအရယူပြီး အသက်သုံးဆယ်ဝန်းကျင်အရွယ်ကောင်းတွင် ကျွန်တော်တို့အား နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့သူ….
ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကို ရဲ့ဝင့်စွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သူရဲကောင်းကြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို ရောက်လာတာ ၁၀၃ နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီလေ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၁၀၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ခရမ်းပြာထက်လူ ရေးသားသော အောင်ဆန်းရှင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ သေခဲ့တယ် ကဗျာဖြင့် ဂုဏ်ပြုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ကျုပ်နံပါတ် ၁ နေရာ ရောက်နေပေမဲ့
ကျုပ် ဘိုးဘိုးအောင်နဲ့ အဆက်အသွယ်မရှိဘူး....တဲ့။
ဒီကားစုတ်ကြီးကို ဆီရေလေ၀ိုင် စစ်ဆေးပြီးရင်
ကျုပ်ဆီမှာရှိတဲ့ ဓာတ်ကြီးလေးပါးကို ညီညွတ်အောင် ညှိ
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စောက်ကျင့်တွေကို ပြင်ကြတဲ့.....။
အစိုးမရတဲ့ အစိုးရတဲ့ သဘောကိုလည်း မပေါက်....။
သူကြီးနဲ့ ရွာသား ဘယ်လိုစကားများတတ်တယ်
တောင်ကျောင်းနဲ့ မြောက်ကျောင်း ဂိုဏ်းကွဲတဲ့ကိစ္စ
ကျုပ်ရုပ်က ခပ်ချာချာမှန်း ကျုပ်သိတယ်
ဒါပေမဲ့ ကျုပ်အတွေးအခေါ်ကိုတော့ အချာမခံခဲ့ဘူး....။
ကျုပ်က အရေပြားပေါ်က ကိစ္စထက်
အရေပြားအောက်က သယံဇာတကို ပိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။
ကျုပ် အစာငတ်တာကို ခံနိုင်ပေမဲ့
လူထုရဲ့ ၇၀ % စကားဟာ အမှန်ပဲ....။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက် ပါဝါကြီးကြီး
ရှင်ဘုရင်ဆိုတာလည်း လူပါပဲတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်က....။
မမေးနဲ့ ဘိုးဘိုးအောင် သွားမမေးနဲ့
ငါးတစ်ကောင် ဖမ်းမိထားသလို တဆတ်ဆတ်
ငေးမနေနဲ့ တက်ညီလက်ညီ သွက်သွက်ချီထား
အလံတွေ လွင့်နေသလို စိတ်တွေလွှင့်ထား
သတင်းကြားရုံနဲ့ ကူးစက်မယ့် စိတ်ကလေးဆောင်ထား
ဒီမှာ လွတ်လပ်ရေးတွေ ရမယ် ရမယ်ဆိုတဲ့
‘လူစွမ်းကောင်း ရှာတွေ့ပြီ အဲဒါအောင်ဆန်းပဲ’တဲ့....။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး သေခဲ့ရတာပါဗျာ.....။ ။
Recommended for you - အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ကတည်းက လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာသူ
ဒီနေ့…. ကြှနျတျောတို့အားလုံးရဲ့ ရငျထဲမှာ လူတဈယောကျအတှကျ မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတောငျးပေး မိမယျဆိုတာ သခြောပါတယျ။ ကိုယျ့မွကေိုယျရေ မှာ သူမြားမကျြနှာကွညျ့စရာမလို ရငျကိုကော့ ခေါငျးကိုမော့ပွီး နထေိုငျနိုငျအောငျ ဘဝတဈခုလုံးကို ပေးဆပျကာ လှတျလပျရေးအရယူပွီး အသကျသုံးဆယျဝနျးကငျြအရှယျကောငျးတှငျ ကြှနျတျောတို့အား နှုတျဆကျထှကျခှာသှားခဲ့သူ….
ဒီနေ့ ကြှနျတျောတို့တိုငျးပွညျကို ရဲ့ဝငျ့စှာကာကှယျစောငျ့ရှောကျပေးမယျ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ သူရဲကောငျးကွီး ကြှနျတျောတို့နိုငျငံကို ရောကျလာတာ ၁၀၃ နှဈပွညျ့မွောကျခဲ့ပွီလေ။
ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ၁၀၃ နှဈပွညျ့မှေးနကေို့ ဂုဏျပွုသောအားဖွငျ့ ခရမျးပွာထကျလူ ရေးသားသော အောငျဆနျးရှငျပွီး ကြှနျတျောတို့ သခေဲ့တယျ ကဗြာဖွငျ့ ဂုဏျပွုတငျဆကျလိုကျပါတယျ။
ကြုပျနံပါတျ ၁ နရော ရောကျနပေမေဲ့
ကြုပျ ဘိုးဘိုးအောငျနဲ့ အဆကျအသှယျမရှိဘူး....တဲ့။
ဒီကားစုတျကွီးကို ဆီရလေဝေိုငျ စဈဆေးပွီးရငျ
ကြုပျဆီမှာရှိတဲ့ ဓာတျကွီးလေးပါးကို ညီညှတျအောငျ ညှိ
ခငျဗြားတို့ရဲ့ စောကျကငျြ့တှကေို ပွငျကွတဲ့.....။
အစိုးမရတဲ့ အစိုးရတဲ့ သဘောကိုလညျး မပေါကျ....။
သူကွီးနဲ့ ရှာသား ဘယျလိုစကားမြားတတျတယျ
တောငျကြောငျးနဲ့ မွောကျကြောငျး ဂိုဏျးကှဲတဲ့ကိစ်စ
ကြုပျရုပျက ခပျခြာခြာမှနျး ကြုပျသိတယျ
ဒါပမေဲ့ ကြုပျအတှေးအချေါကိုတော့ အခြာမခံခဲ့ဘူး....။
ကြုပျက အရပွေားပျေါက ကိစ်စထကျ
အရပွေားအောကျက သယံဇာတကို ပိုဂရုစိုကျခဲ့တယျ။
ကြုပျ အစာငတျတာကို ခံနိုငျပမေဲ့
လူထုရဲ့ ရ၀ % စကားဟာ အမှနျပဲ....။
ဘယျသူတှေ ဘယျလောကျ ပါဝါကွီးကွီး
ရှငျဘုရငျဆိုတာလညျး လူပါပဲတဲ့ ဗိုလျခြုပျက....။
မမေးနဲ့ ဘိုးဘိုးအောငျ သှားမမေးနဲ့
ငါးတဈကောငျ ဖမျးမိထားသလို တဆတျဆတျ
ငေးမနနေဲ့ တကျညီလကျညီ သှကျသှကျခြီထား
အလံတှေ လှငျ့နသေလို စိတျတှလှေငျ့ထား
သတငျးကွားရုံနဲ့ ကူးစကျမယျ့ စိတျကလေးဆောငျထား
ဒီမှာ လှတျလပျရေးတှေ ရမယျ ရမယျဆိုတဲ့
‘လူစှမျးကောငျး ရှာတှပွေီ့ အဲဒါအောငျဆနျးပဲ’တဲ့....။
ကြှနျတျောတို့အားလုံး သခေဲ့ရတာပါဗြာ.....။ ။
Recommended for you - အသကျ ၁၁ နှဈအရှယျကတညျးက လုပျငနျးရှငျတဈယောကျဖွဈလာသူ
Read 3274 times Last modified on Tuesday, 13 February 2018 16:03
ညဘက်အချိန်မှန်အိပ်ခြင်းက ပိုပြီး smart ကျစေတယ်ဆိုတာ သိပြီးပြီလား
သင့်ဦးနှောက် စွမ်းရည် ကောင်းအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်း (၇) နည်း
STARS Special Care Centre